Laba Manchester oo kulmaya cayaar u dhiganta final - BBC Somali
Laba Manchester oo kulmaya cayaar u dhiganta final
30 Abriil 2012
Hoggaamiyeyaasha tartanka horyaalka Ingiriiska ee Manchester United iyo Manchester City waxay goor dhow isaga hor imanayaan ciyaar ka mid ah kuwii ugu muhiimsan tartanka horyaalka kubbadda cagta Ingiriiska ee sanadkan oo ka dhacaysa garoonka Etihad ee kooxda Man City.
Manchester City weligeed ma qaadin horyaalkan lagu magacaabo Premier League, halka Manchester United ay koobkan Premier League kor qaadday 12 jeer.
Intii jeer ee labadan kooxood ay taariikhda soo wada ciyaareen waxay u kala badiyeen:
Manchester United 67 goor. Manchester City 44 jeer.
Manchester City iyo Manchester United way ogsoon yihiin in ciyaarta caawa ay saameyn weyn ku yeelanayso qaadista horyaalka ee sanadkan.
Haddii aynu dib u eegno kulammadii horyaalka ee labadan kooxood ay la soo ciyaareen kooxaha kale waxay u dhaceen sidatan:
Manchester United waxay leedahay 83 dhibdood, Manchester City waxay leedahay 80 dhibcood laakiin waxay haysataa goolal dheeraad ah oo waxay dhalisay 60 gool, halka Manchester United ka haysato 54 gool.
Xagga gool dhalinta ciyaar walba Manchester City waxay dhalisaa 2. 49, halka Manchester United ay ka dhaliso 2.46 aad ayay isugu dhow yihiin.
Inta kulan ee aan wax gool ah laga dhalin labadan kooxood waxaa weeye Manchester United 18 ciyaarood wax gool ah lagama dhalin, Manchester United 15 ciyaarood wax gool ah lagama dhalin.
Isu-dhiibidda kubadda Manchester City waxay saxday 85.85%,, Manchester United waxay saxday 85.32%.
Ciyaartoy la isticmaalay Manchester City waxay ciyaarsiisay 24 laacib intii tartanku socday, halka manchester United ay ka adeegsaday 31 ciyaartoy.
Waxyaabaha ciyaartan xiisaha u sii yeelaya waxaa ka mid ah laacibka Carlos Tevez oo sheegay inuu dhammaaday khliaafkii kala dhexeeyay tababaraha kooxda Manchester City Roberto Mancini isla markaana uu maalmahan bilaabay inuu goolal u dhaliyo kooxdiisa iyo labada tababare ee tartanku ka dhexeeyo oo mid waliba sheegay in kooxda kale qaadi karto koobka horyaalka sanadkan.
Barbar dhac waxay u wanaagsan tahay Manchester United.